ကြံ့ခိုင်မှု - Come4Buy eShop
$ 14.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ - $ 138.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Electrical Muscle Stimulation Training ကိရိယာ
$ 30.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 40.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Electrical Muscle Stimulator Electrical Muscle Stimulation Training Device၊ Electric Muscle Training ၊Smart Charger USB Abdominal Machine Model Number: C4B - OUT122Function: Waist & Abdomen ExerciseTeaching Mode: OtherClassified by Exerciser Number: 1Use scenarios:...
$ 44.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 50.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
မော်ဒယ်နံပါတ်: C4B - OUT19Function: WaistTeaching Mode: OtherClassified by Exerciser Number: 1Mode:6modesStrength: 1-9Frequency: 45-175Hz အသုံးပြုနည်း- တစ်နေ့ 1-2 ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် မိနစ် 20 အသုံးပြုမှုများ: ကြံ့ခိုင်မှု၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ ၊...
Elastic resistance တီးဝိုင်းဝတ်စုံ
$ 23.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 36.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Elastic resistance band suit Elastic Resistance Band Set-Fitness Resistance Band။ အိမ်မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးက ပိုလွယ်တယ်။ Resistance Bands များသည် သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပါသည်။ ဘက်စုံသုံး ချိန်ညှိနိုင်သော ခံနိုင်ရည်လှိုင်း...
Electrical Muscle Stimulation ကာယဗလ ကိရိယာ
$ 31.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 42.98 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
လျှပ်စစ်ကြွက်သားလှုံ့ဆော်ခြင်း ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း ကိရိယာ၏ အင်္ဂါရပ်- ကြွက်သားလေ့ကျင့်မှုနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပိန်စေမှုအတွက် ဝမ်းဗိုက်လေ့ကျင့်ရေးဆရာ၊ ဒီကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းက သင့်ကြွက်သားတွေကို တင်းတင်းရင်းရင်း သန်မာစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်...
$ 34.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 45.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Electrical Muscle Stimulation Machine Application: OtherFunction: Waist & Abdomen ExerciseModel Number: C4B -OUT61Type: Single-WheeledMain Material Body: PET resin gel အသုံးပြုမှု အခြေအနေများ- အလုပ်၊ အိမ်စာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ အပြေး၊ shopping.How to use: 1-2. .။
လျှပ်စစ်သံလိုက် ပဲမျိုးစုံသည် တင်းကျပ်သော ကြွက်သားများကို သန်မာစေရန် ကူညီပေးသည်။ အင်္ဂါရပ်များ- ခိုင်မာမှု၊ အသံ၊ ကြွက်သားများကို ခိုင်ခံ့စေပြီး တင်းကျပ်စေသည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ပဲများသည် သင့်အူတိုင်ကို ခိုင်မာစေပြီး ကြွက်သားကျုံ့မှုကို အားကောင်းစေကာ လွယ်ကူသော ခလုတ်6ခုဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့် ...
အနီရောငျ Black က ပြာသော ဝါသော ပန်းရောင် ညိုသော multi ရှင်းလင်းသော ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
ကြွက်သားလှုံ့ဆော်စက် ABS Hip Trainer...
$ 40.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 50.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
မော်ဒယ်နံပါတ်: OUT89Function: Waist & Abdomen ExerciseTeaching Mode: OtherClassified by Exerciser Number: 1Main Material Body: PET resin gel အသုံးပြုမှု အခြေအနေများ- အလုပ်၊ အိမ်စာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ အပြေး၊ ဈေးဝယ်။ အသုံးပြုနည်း- 1-2 ကြိမ်...
EMS တင်ပါးကြွက်သားလေ့ကျင့်ပေးသူ တင်ပါး...
$ 30.58 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 42.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
သတ်မှတ်ချက်- ထုတ်ကုန်အမည် : Hip Trainer Material :PU(polyurethane) သားရေအရောင် : အနက်ရောင် နှင့် လိမ္မော်ရောင် အရွယ်အစား : 28x20.8cm / 11.02''x8.18'' Controller Power Supply :2x AAA Battery 1.5V (မပါဝင်ပါ) အထွက်- Max . 9.8mA အလုပ်လုပ်သည်...
2 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
လျှပ်စစ်ကြွက်သားလှုံ့ဆော်မှု အကျိုးကျေးဇူးများ ကိရိယာ
$ 33.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 42.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Electrical Muscle Stimulation Benefits Device Model Number: C4B - OUT141Function: Waist & Abdomen ExerciseTeaching Mode: BookClassified by Exerciser Number: 1Use scenarios: အလုပ်၊ အိမ်စာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ အပြေး၊ ဈေးဝယ်နည်း။ အသုံးပြုနည်း- 1-2...
စိမ်းလန်းသော အနီရောငျ ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
အဆီလျှော့ချခြင်း ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား အဆီလျှော့ချခြင်း ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား ခါးပတ် ပျင်းရိကြံ့ခိုင်ရေး ကိရိယာ အသုံးချနိုင်သော မြင်ကွင်း- ကြံ့ခိုင်ရေး ပစ္စည်း၊ ကျန်းမာရေး အနှိပ်ခန်း၊ ကြံ့ခိုင်မှု ခန္ဓာကိုယ် အရောင်- လက်တစ်ဖက် + တန်ဆာ၊ ခါးပတ်တစ်ခု + တန်ဆာ၊ အပြည့်အစုံ...
Full Set အပြာ Full Set လိမ္မော်ရောင် Single Arm + Host Single Belt ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ
Muscle Electro Stimulator Abs ကြွက်သား...
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- LISMModel နံပါတ်- OUT38Function- WaistTeaching Mode- အခြားလေ့ကျင့်ခန်းနံပါတ်အလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်- 1 အားသွင်းချိန်- 1 နာရီPackage ပါ၀င်သည်- 3* Main ယူနစ်၊ 1*Abdominal Belt, 2*Arm Stickers, 1* USB အားသွင်းကြိုးFeatures2: Abdominal Muscle Stimul. .
$ 35.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 45.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Abdomen Wheel Shaping Fitness Thin Pull rope double-wheel ဝမ်းဗိုက်ဘီးပုံသွင်းကြံ့ခိုင်မှု ပါးလွှာသောခါးလျှော့ချ ဝမ်းဗိုက် roller, Multifunctional Rally Four-Wheel Abdominal Apparatus Specifications: 43 × 18.5 × 13 cm Packing: အရောင်...